Kana Glacier Express haana chando zvakakwana uye chando here, ipapo uchaita kuda kure negungwa Line. Izvi 14 maawa nechitima uchinzvera kunotanga Kristinehamn usati nzira kwayo kuburikidza untamed Air nomunzvimbo dzine kurutivi Gallivare. Kubva pahwindo rako, muchaona kweArctic Circle uye – kana iwe chengeta meso ako akasvuura – dzimwe mhuka dzesango muchimiro chemhembwe, Stony, uye Elk.
Saka ikozvino mushure mekunge iwe wadzidza nezve chitima nzira nzira uye wagadzirira kuenda kune inochinja-hupenyu njanji kukwira iwe uchipolisha yako Instagram account uye uwane vamwe vateveri vatsva? Bhuku rako kurota chitima rwendo nhasi pa Save A Train. Uye iwe unogona zvakare kutarisa yedu Instagram account instagram.com/saveatrain
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-train-route-views-to-make-your-instagram-account-shine%3Flang%3Dsn/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)